Kenyatta oo markii uu dantiisa ka gaarey la kici raba Aadan Ducaale & xaalka oo ku cakiran!! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Kenyatta oo markii uu dantiisa ka gaarey la kici raba Aadan Ducaale...
Kenyatta oo markii uu dantiisa ka gaarey la kici raba Aadan Ducaale & xaalka oo ku cakiran!!
(Nairobi) 26 Maajo 2020 – Md Aden Duale, Md Ben Washiali iyo Md Kimani Ichung’wa ayay xaaladdu ku xun tahay, iyadoo ay dhici karto in la tuuro kaddib markii lagu eedeeyey daacad darro.
Kaddib markii uu Ahuru Kenyatta uu hoggaanka Senate-ka soo nadiifiyey, wuxuu iminka xaaqinku u weecanayaa dhanka Baarlamanka iyo xubnaha ugu jira Xisbiga Jubilee Party, iyadoo la muddeeyey kulan xubnaha xisbiga dhex maraya Juun 2 ama 6.
Sidii ka dhacday Senate-ka xisbiga, waxaa lagu wadaa in la bartilmaameedsado Xildhibaannada ologga la ah Madaxwayne Xigeenka William Ruto, iyadoo uu Uhuru Kenyatta doonayo inuu gacanta ku wada dhigo hoggaanka xisbiga iyo kan Baarlamanka intaba.
Waxaa dadka diiraddu saaran tahay ka mid ah Aden Duale kaasoo weli isu jilcinaya Md Kenyatta, si doorka looga wareejiyo oo uu uga badbaado baangadda kusoo socota.
Yeelkeede, Xildhibaan Jakoyo Midiwo Herman Manyora oo ka tirsan University of Nairobi ayaa taageeray Md Ducaale, oo ay sheegeen inuu si wanaagsan ugu shaqeeyey Kenyatta.
Mr Manyora ayaa sheegay in Ducaale oo naftiisa ku biimeeyey meelo uusan xitaa Madaxwaynuhu ku dheceen, si uu usoo sameeyo waxa uu Madaxwaynuhu rabo.
“Haddii aad i waydiiso, waxaan oran karaa waa sida baldoosar si wanaagsan ugu shaqeeyey ninka iska leh (Kenyatta). Wuxuu daacad u ahaa wax kasta oo loo diro,” ayuu yiri Mr Manyora.
“Haddii ay bedelaan, marna abidkood ma heli doonaan qof u qabta howshii uu u hayey,” ayuu yiri Midiwo.
Ducaale ayaa lagu xusuustaa in xitaa loo diray xafladdii is-caleemo saarka ahayd ee Axmed Madoobe, halkaasoo uu ka sheegay warar meel ka dhac ku ah Somalia oo uu usoo hoggaamiyey wefdi Kenyan ah oo sharci darro kusoo galay.
Previous articleDHEGEYSO: Waayo ciddii ka dambeeysey dayuurad lagu rasaaseeyey Qansaxdheere
Next articleShiinaha iyo Australia oo isku il xun & Maraykanka oo ciidan u diray + Sawirro